Ukuhonjiswa Kwehlobo Kunye Nesitayile | December 2021
I-25 yeeNdawo eziHleliweyo zeHlabathi ezingama-2021 -Iimbono zeWreath zaseHlobo kwiiNdawo zangaphambili
Sebenzisa ixesha elitsha ngezi ntyatyambo zasehlotyeni kumnyango wakho wangaphambili. Ukusuka kwiintyatyambo ukuya kumagobolondo olwandle, siqokelele ezona ntyatyambo zasehlotyeni zokuthenga kunye ne-DIY.
I-30 + ye-4 egqibeleleyo kaJulayi yokuhombisa i-2019-ukuhonjiswa kweKhaya okuthandekayo
Ukuphosa usuku lokuzimela? Ukusuka kwiibhaluni ezimnandi ukuya kumagqabantshintshi ajikelezwe yinkwenkwezi, nantsi yonke into oyifunayo ukuze uyibonakalise kwitheko lakho le-4 kaJulayi kulo nyaka.
Nokuba unayo ibhalkhoni encinci okanye igadi ebanzi, ezi 58 ngasemva kwendlu kunye nemibono yepatio ziya kukunceda usebenzise imozulu eshushu ngesitayile.
Iingcamango ezingama-50 eziHlangayo zangaphambili zeNdlu- Uyilo lweeVaranda kunye neeNgcebiso zokuhombisa
Fumana ukhuthazo kwezi ndawo zangaphandle zintle kwaye uzame uluvo lwakho oluthandayo loyilo lweveranda ekhaya.
Akukho nto yomlingo njengomntwana ngaphandle kwendlu yomthi. Ezi zimvo zipholileyo zomthi ziqala ngokulula ukuya kupholile kwaye kunzima.
Iingcamango ezi-20 eziPhambili zePati yeGadi-Uyiphosa njani iJardin-Enomdla
Ngaba ufuna ukuphosa ipati yegadi? Ezi zimvo zepati yegadi ziya kuqinisekisa ukuba eyakho yeyona nto ibalaseleyo ehlobo.
Iingcamango ezi-19 eziPhambili zangasemva kweMpahla yoMlilo - Iiplani zoMlilo zangaphandle zoMlilo
Ukusuka kwindawo ephathekayo, evaliweyo yangaphandle yomlilo ukuya kwindawo entle, evulekileyo yobhedu kunye nemingxunya yentsimbi, ezi zimvo zingasemva zomlilo eziphuma ngasemva (kunye neenketho ezinokuthengwa ngexabiso) ziya kukunceda ufumane izinto zikhanyisile kweli hlobo.
Iingcamango ezingama-28 zeDesika yokuyila-Uyilo oluhle lwangaphandle lweDisk
Nokuba uchitha indawo yakho yangaphandle okanye uyinika ukuvuseleleka ngokukhawuleza, ezi zimvo zingama-28 zodidi kunye noyilo ziya kukunceda ukuba uqalise.
Iingcamango ezingama-60 eziMhle zokuBekwa komhlaba - Ezona ziNgcono ziNgcono zeMihlaba engasemva
Uyilo lomhlaba ocingisisiweyo sisitshixo sokwenza i-oasis yangaphandle. Ukusuka kwiintyatyambo ezingalindelekanga ukuya kwiindlela ezinqabileyo, vumela ezi zimvo zingama-60 zokuhombisa umhlaba zivule indlela.
Iingcamango ezingama-20 zeQela lePhuli ePhambili- Uyiphosa njani eyonaPati yePhuli yeHlabathi
Ukusuka kwimixholo yoyilo ukuya kwizinto ezintle zokuhombisa kunye nokuzonwabisa, ezi zimvo zepati zedama ziya kwenza ihlobo lakho libe ngcono kunangaphambili.
Iiplani ezingama-40 eziPhezulu zePhuli zoMdibaniso oMnandi
Khuthazwa zezi zimvo zoyilo zinqabileyo, ukusukela kwisimbo sokubuyela eTuscan ukuya echibini langoku. Iholide yengqondo, naku usiza.
I-22 yeentyatyambo zasehlotyeni ezigqwesileyo kwigadi yakho
Ufumana ihlobo kuphela iinyanga ezimbalwa kunyaka, ngoko ke unokuguqula ikhaya lakho kunye negadi ibe yi-flower mania egcweleyo ngelixa unako. Ezi zezona ntyatyambo zintle zasehlotyeni oza kufuna ukuzityala kwaye uzibonise kwikhaya lakho kwiinyanga ezishushu.
Iingcamango ezingama-40 zePati yeHlabathi-Izihloko kunye neMihombiso yamaQela asehlotyeni
Amatheko asehlotyeni ngawona msitho ulindelweyo enyakeni-yenza ukubala kwakho ngokuthinta okukhethekileyo kunye nemibono yokuhombisa abahlobo bakho kunye nosapho abangayi kuyilibala.
I-55 yokuCwangciswa kweentyatyambo ngokuLungiswa kweNgcaciso kunye neMifanekiso- Indlela yokwenza iziCwangciso eziMnandi zeentyatyambo
Funda indlela yokuthayipha amalungiselelo amahle eentyatyambo ukuze uzonwabise iindwendwe kwaye uhombise ikhaya lakho kwangoko. Naphi na apho ubeka khona iintyatyambo zakho, ezi ngcinga ziyiliweyo ziyakukhangeleka ngcono kwaye zihlala ixesha elide kunangaphambili.
Iingcamango ezingama-50 eziPhefumlayo zangasemva kweNdawo-Ukuphefumlelwa koYilo lwangaphandle
Yilungele i-al fresco kunye nale mibono yasemva kwendlu, ukusuka kumhlaba owenziwe kakuhle ukuya kwiipatios ezintle kunye namachibi eparadesi.
I-40 + iiresiphi ezilula zedessert zasehlotyeni- Izimvo ezintle zeDessert yehlobo
I-S'mores, pie pie, intandokazi efanelekileyo (njengamaqebelengwane e-funnel!) -Ihlobo ligcwele iidessert ezimnandi ukuze uzonwabele. Ukusuka ekukhanyeni nasekuhlaziyweni ukuya kwi-decadent ngokupheleleyo, sine-dessert kuwo wonke umsitho omkhulu ukusuka kuSuku lweSikhumbuzo ukuya kwi-LDW.
Iingcamango ezi-18 ezigqibeleleyo zokuhombisa amanxweme ngo-2018
Nokuba awunayo indlu yaselunxwemeni (okanye isikhephe), ezi zimvo zisenokuliguqula ikhaya lakho ngale mibono yokuhombisa elunxwemeni.
Umhla we-4 kaJulayi weeNgcaciso kunye noMhombiso- ungawubamba njani umhla wesine kaJulayi
Olu suku lwe-Independence, phuma nge-banger-spangled banger. Ukusuka kwiibhaluni ezizaliswe yi-confetti ukuya kwi-sangria yokuthand 'izwe, ezi-4 zikaJulayi izimvo zepati zilungele iNkululeko yoLuntu.
Iingcamango ezincinci zePatio-Ukuhombisa iiNdawo ezincinci zangaphandle
Yenza uninzi lwepatiyo encinci okanye ibhalkhoni encinci ngezi zimvo zistayile.
Iingcamango ezingama-31 zangaphandle zokuhlamba ngaphandle-eziMangalisayo zoyilo lwangaphandle
Ukuba ujonge ukukhuthazwa ukuze uphucule nzulu iyadi yakho yangasemva, kuya kufuneka ujonge uyilo oluhle lwangaphandle kwishawa yethu yokugcina.
izimvo zangasese zelizwe elincinci
imibono elula yokuhombisa igumbi
Ikrisimesi yakhokelela kwizibane zomkhenkce